I-Italiya ngokuchasene neBrussels Showdown | Ezezimali
Ukujongana ne-Itali ngokuchasene neBrussels
Iziphumo zonyulo lwePalamente yaseYurophu ebibanjwe nge-26 kaMeyi zingakhokelela kwimpikiswano entsha phakathi kwe-Itali neBrussels ezinokuba nesiphumo esithile kwiimarike zokulingana zelizwekazi elidala. Hayi ngelize, ngokolwazi olupapashwe yiarhente yeendaba Bloomberg, I-European Union inokuthi ithathele ingqalelo ukhetho lwe vula inkqubo entsha yoluleko ngokuchasene ne-Itali ngokungayihloniphi imigaqo yoluntu kulwabiwo-mali. Nangona esona siphumo sikhulu siya kuba kukulingana kwelizwe elinamaphiko.
Apho olona phawu lubalulekileyo kukuba iipremiyamu zomngcipheko zihlala zikumanqanaba afanayo nakwezinye iinyanga zonyaka. Ngaphandle kwimeko ye-Italiya leyo inyuke yaya kufikelela kwi-6% ukuzibeka kufutshane kakhulu namanqaku esiseko se-300. Ngelixa ngokuchaseneyo, ipremiyamu yomngcipheko waseSpain inyukele kumanqanaba asondele kakhulu kumanqaku esiseko se-100. Ukusuka kule ndawo yokujonga, le yinto engena mpembelelo ibalulekileyo ngalo mzuzu. Ngempembelelo encinci phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Ngelixa kwelinye icala, enye yezona zinto zibalulekileyo ezinokubangela ungquzulwano phakathi kwe-Itali neBrussels kukwanda kwento I-transalpine ityala loluntu. Ngale ndlela, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokulumka ngakumbi ekuqeshweni kwale mveliso yemali. Ngokukodwa ngokutyala imali kwezi mpawu. Logama nje le meko igcinwe, iyakuthintela ngokupheleleyo ekungeneni kwezi mveliso ezijolise kutyalo-mali kuba ngokuqinisekileyo azizukufumana nzuzo kwaphela.
1 ElamaTaliyane: jonga ipremiyamu yomngcipheko
2 Ukuphonononga isalathiso esikhethiweyo sentengiso yemasheya
3 Ukuqwalasela ukuvela kweemarike
ElamaTaliyane: jonga ipremiyamu yomngcipheko
Enye yeeparameter zoqoqosho ekufuneka ngokuqinisekileyo zibukelwe yiprimiyamu yelizwe. Ukuqinisekisa ewe elona xesha lilungileyo okanye bangangeni kwiimarike zabo zengeniso esisigxina. Kodwa njengesilumkiso sendlela amaxabiso aphambili anokukwenza ngayo kwimarike yemasheya. Iya kuba sisicwangciso-qhinga apho iya kuthi inike umqondiso ongaphezulu kwesinye malunga nento ekufuneka uyenzile ngamaxesha onke kwiimarike ezahlukeneyo zezemali. Ngesixhobo esingaphaya kokuthandabuza kwaye sinokukunceda ukuphucula inzuzo yakho kwiimarike zezemali.
Ngelixa kwelinye icala, inokukunika isikhokelo sokuphuma ngaphambi kwexesha lokungazinzi okukhulu ngenxa yeeparameter ezibonisa imeko yokwenene yoqoqosho ukusuka kwelinye lawona mazwe anamandla kwi-European Union. Ngaphandle kwalo naliphi na ixesha kufuneka wenze nawuphi na umzamo wokufezekisa ezona njongo zakho ziphambili kwiimarike zezemali, kokubini kwingeniso engaguquguqukiyo kunye nokwahluka. Kungenxa yokuba ungathandabuzeki nangaliphi na ixesha ukuba kukho imali eninzi echaphazelekayo. Ngokukodwa ukuba ukungqubana phakathi kwe-Itali neBrussels kuyaqina. Into enokwenzeka ngokugqibeleleyo kwiintsuku okanye kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Ukuphonononga isalathiso esikhethiweyo sentengiso yemasheya
Omnye umsebenzi oya kuthi uphakamise ukusukela ngoku ukuya phambili kukujonga esweni isalathiso sezabelo zase-Italiya ngokusondeleyo. Ukujongana nemeko enokubakho Ukuziphatha okubi kunakwamanye amazwe kwindawo abahlala kuyo. Ukusuka kule meko ngokubanzi, umlinganiso osebenza kakuhle uya kubandakanya ukungqinisisa ukuthelekiswa kwesalathiso sase-Italiya nelizwekazi lakudala. Ukuze ngale ndlela, ungakhetha eyona ngxowa inenzuzo ngawo onke amaxesha. Kuxhomekeka kwimeko nganye enokubakho kwimeko nganye yokuhlangana edibana ngalo naliphi na ixesha.
Ngelixa kwelinye icala, asinakulibala ukuba ii-equity ngoku zithengisa ngesaphulelo esibalulekileyo xa kuthelekiswa nezinye iimarike zezabelo kweli lizwekazi. Ukusuka kule ndawo yokujonga, akukho mathandabuzo okuba amandla aphezulu enayo iphezulu kakhulu kunezinye izikwere. Nangona kufuneka wazi ukuba uza kuvula nini izikhundla kumaxabiso esitokhwe kwaye ukhethe amanqanaba okuphuma. Ngamaxesha onke ngamaxabiso ahlengahlengisiweyo, ngenye indlela okanye enye. Ke ngale ndlela, ukwimeko engcono yokwenza ulondolozo lube nenzuzo ukusukela ngoku.
Ukuqwalasela ukuvela kweemarike
Kunyaka ophelileyo, ii-equity zase-Italiyenye yezona ndawo zisilele ngasemva ngenxa yezopolitiko, ezikhokelele kwipremiyamu ephezulu yomngcipheko ukuya kuthi ga kumanqaku angama-300. Ngaphandle kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwezobuchwephesha nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Into esingamele siyilibale ukuba sifuna ukubangabikho zimpazamo kwizicwangciso zotyalo-mali esiza kuzisebenzisa ukusukela ngoku. Kuba into emalunga noku kukuqinisekisa ukuba ikomkhulu lethu lobuqu okanye losapho liyaqhubeka nokwanda unyaka nonyaka. Oko kukuthi, emva kwayo yonke loo nto, eyona nto iphambili kuthi.
Enye into ekufuneka ihoyiwe kwezi ntsuku zizayo kukuba iiakhawunti eziboniswa yi-Italiya kwi-European Union. Apho enye yezinto eziza kujongwa ngeglasi yokukhulisa nokuba ingaba kunjalo wandise ityala Kungoko ke inokungavunywa ngamaqumrhu oluntu afanelekileyo. Le yenye into enokuthi ichaphazele imarike yase-Italiya kwinxalenye yesibini yalo nyaka. Kwaye ke, nakuphi na ukwenzeka kweli candelo kunokukhokelela kwenye okanye kwenye imeko exhaphakileyo phakathi kwabatyali mali.
Kwelinye icala, kufuneka kugxininiswe ukuba iKhomishini yaseYurophu inokuwisa isohlwayo se-3.000 yezigidi ze-euro e-Itali ngokwaphula imithetho ye-European Union ngenxa yokunyuka kwamatyala ayo kunye nokusilela kwayo kulwakhiwo, ngokuka-Sekela-Nkulumbuso welizwe. ., UMatteo Salvini. Ngale ndlela, i-FTSE Mib yase-Italiyane iwele kufutshane ne-1%, ngezantsi kwezinye ii-indices zaseYurophu. Kwimeko enokuthi ivelise enye ingxaki kwiimarike zezabelo ukusukela ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukujongana ne-Itali ngokuchasene neBrussels
Iimveliso ezinobungozi bokutyala imali
Yintoni ethengisa kwimarike yemasheya?